ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ် skin care routine လုပ်တာမှန်မမှန် အမှတ်ဘယ်လောက်ရလဲတွက်တဲ့ ဂိမ်းလေး | CosmeticMyanmar
Home » Article » ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ် skin care routine လုပ်တာမှန်မမှန် အမှတ်ဘယ်လောက်ရလဲတွက်တဲ့ ဂိမ်းလေး
ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ် skin care routine လုပ်တာမှန်မမှန် အမှတ်ဘယ်လောက်ရလဲတွက်တဲ့ ဂိမ်းလေး
ဒီတစ်ပါတ်မှာတော့ ပျိုမေတို့ရဲ့လက်ရှိ အသားရေထိန်းသိမ်းမှုတွေကို တွက်ချက်လို့ရအောင် admin က အပျင်းပြေဂိမ်းလေးလုပ်ထားတယ်နော်။ အောက်မှာရေးထားတဲ့အချက်လေးတွေကိုတွက်ရင်း အမှတ်ဘယ်လောက်ရလဲ တွက်ကြည့်ရအောင်? အဖြေလေးတွေကိုသေချာလေးရွေးပေးနော်။
1.နေ့တိုင်းမိတ်ကပ်တွေလိမ်းပြီး make up remover နဲ့သေချာပြန်ဖျက်လား?
နေ့တိုင်းသေချာဖျက်တယ် (၃ မှတ်)
စိတ်ပါရင်ဖျက်တယ် တစ်ခါတစ်လေမဖျက်ဘူး (၂ မှတ်)
ရိုးရိုးမျက်နှာသစ်ဆေးနဲ့ပဲသစ်တယ် (၁ မှတ်)
2.Toner, Moisturiser အဆင့်ဆင့်သေချာလိမ်းလား?
နေ့စဉ်သေချာလိမ်းတယ် (၃ မှတ်)
တစ်ခါတစ်လေလိမ်းတယ် (၂ မှတ်)
အဲ့ဒ့ါတွေလိမ်းရတာခုမှသိတယ် (၁ မှတ်)
3.eyes cream , eyes serum တွေဂရုတစ်စိုက်လိမ်းလား?
နေ့တိုင်းသေချာလိမ်းတယ် (၃ မှတ်)
စိတ်ကူးပေါက်တဲ့နေ့ ထလိမ်းတယ် (၂ မှတ်)
ခုမှ ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ် (၁ မှတ်)
4.တစ်ပါတ်တစ်ခါလောက်သဘာဝပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ ပေါင်းတင်ဖြစ်လား? ဒါမှမဟုတ် sheet mask လေးတွေကပ်ဖြစ်လား?
တစ်ခါတစ်လေကပ်တယ် (၂ မှတ်)
ပုံမှန်လေးစနစ်တကျလုပ်ဖြစ်တယ် (၃ မှတ်)
တစ်ခါမှမကပ်ဖြစ်ဘူး (၁ မှတ်)
5.အပြင်သွားတိုင်း sunscreen, sun care တွေလိမ်းလား?
ပုံမှန်လိမ်းတယ် (၃ မှတ်)
တွေ့ရင်ယူလိမ်းလိုက်တယ် ပုံမှန်မရှိဘူး (၂ မှတ်)
ခုမှလိမ်းဖို့စဉ်းစားနေတယ် (၁ မှတ်)
6. Matte နှုတ်ခမ်းနီတွေမဆိုးခင်နဲ့ ဆိုးပြီးတိုင်း lip balm ခံလိမ်းလား?
အမြဲလိမ်းတယ် (၃ မှတ်)
တစ်ခါမှမလိမ်းဘူး (၁ မှတ်)
ပုံမှန်တော့မရှိဘူး (၂ မှတ်)
ပုံမှန်အိပ်ချိန်ရှိတယ် (၃ မှတ်)
နေ့တိုင်းနောက်ကျပြီးမှအိပ်ဖြစ်တယ် (၁ မှတ်)
ရေဆာဆာမဆာဆာပုံမှန်သောက်ဖြစ်တယ် (၃ မှတ်)
ရေအရမ်းသောက်ချင်မှသောက်လိုက်တယ် (၂ မှတ်)
ရေအစား အချိုရည်, ကော်ဖီတွေပဲပိုသောက်ဖြစ်တယ် (၁ မှတ်)
ကဲ အမှတ်တွေတွက်ကြည့်လိုက်လို့ ၈မှတ်ကနေ ၁၂မှတ်ရရင်တော့ ပျိုမေရဲ့ daily skincare routine ကိုပြောင်းလဲသင့်နေပြီနော်။
၁၂ မှတ်ကနေ ၁၈ အတွင်းရရင်တော့ သင်က skincare ကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာသိပြီး ပုံမှန်မလုပ်ဖြစ်တာပါ။
၁၈ မှတ်ကနေ ၂၄ မှတ်အတွင်းရရင်တော့ သင့်ကို မေးကြည့်ဖို့တော့လိုမယ်မထင်တော့ပါဘူး, skincare ကိုလည်းသိပြီး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့လည်းဂရုတစိုက်လုပ်တဲ့သူပါ။
ပျိုမေတို့ကို skincare routine လေးသေချာလုပ်ဖြစ်သွားအောင် remind လုပ်ပေးတဲ့ game လေးမို့ အသုံးဝင်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။
ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါ ဆံသားပြဿနာများ ဖြေရှင်းနိုင်စေဖို့!!!